Lezi izici ezintsha eziyi-10 ezimangaza kakhulu ze-iOS 16 | Iforamu yeselula
UJose Albert | 18/06/2022 12:00 | Kubuyekezwe ngomhla ka- 18/06/2022 12:11 | Mac, Izinhlelo zokusebenza
Sivame ukwabelana izifundo zendlela yokuxazulula izinkinga o thuthukisa ulwazi lomsebenzisi kokwaziwa kakhulu nokusetshenziswayo Izinhlelo zokusebenza, womabili amakhompyutha (IWindows, macOS kanye ne-GNU/Linux), kanye namadivayisi eselula (I-Android ne-iOS). Ngenkathi sikwamanye amathuba, sivame ukunikela izindaba noma izindaba ehlobene nabanye babo. Njengakuleli thuba, lapho sizomemezela khona Eziyi-10 ezinhle kakhulu "yini entsha ku-iOS 16".
Izindaba ezisanda kwaziwa emhlabeni wonke, ngenxa ye umcimbi waminyaka yonke wezobuchwepheshe omangalisayo eyaziwa ngokuthi yi-WWDC, okusobala ukuthi kulo nyaka WWDC22. Lapho kungezona lezi kuphela eziye zenziwa zaziwe, kodwa abanye abaningi, abavela ezahlukene ihadiwe nemikhiqizo yesoftware we Inkampani ye-Apple.
Ungayakha kanjani isithombe sangemuva sakho seselula ye-Android ne-iOS?
Futhi, ngaphambi kokuqala isihloko sanamuhla, mayelana ama-iPhones kanye nalo Isistimu yokusebenza ye-iOS, ikakhulukazi ku- «yini entsha ku-iOS 16». Sincoma ezinye zethu okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene:
Usenza kanjani isithombe sangemuva sakho seselula ye-Android ne-iOS
Ungarekhoda kanjani isikrini se-iPhone mahhala nokuthi sisebenza kanjani
1 Yini entsha ku-iOS 16: I-iOS entsha ye-iPhone 8 ukuya phambili
1.1 Izici zethu ezintsha ezi-5 eziphezulu ku-iOS 16
1.1.1 Khiya isikrini
1.1.2 Izindlela Ezifundisayo
1.1.3 Ilabhulali yezithombe ezabiwe nge-iCloud
1.1.4 Imilayezo ethuthukisiwe
1.1.5 Ukuphathwa kwe-imeyili okuhlakaniphile
1.2 5 ezinye izindaba ezibalulekile
Yini entsha ku-iOS 16: I-iOS entsha ye-iPhone 8 ukuya phambili
Izici zethu ezintsha ezi-5 eziphezulu ku-iOS 16
I-iOS 16 izohlanganisa izici ezintsha zokwenza ngokwezifiso mayelana ne isikrini esivaliwe. Ukuvumela noma yimuphi umsebenzisi ukuthi afake isethi yezithombe eziyintandokazi ukuze abukwe, ukwazi ukushintsha ifonti ebonisiwe, ukubonisa ama-emoji futhi wengeze amawijethi akhona namasha anezici eziwusizo nezihlukahlukene, ukuze uthole ulwazi olungcono lomsebenzisi uma ebuka iselula ngaphandle kokuvula ifoni. .
Futhi, izaziso zesikrini sokukhiya manje sezizoboniswa phansi kwesikrini sokukhiya. Futhi uma kudingekile, ungakwazi ukujabulela izikrini zokukhiya ezahlukene, ngasinye sinokwenza ngokwezifiso (isizinda nesitayela).
Le nguqulo entsha izosebenzisa okuthiwa gxila esikrinini sokukhiya. Umsebenzi onhloso yawo kungukunikeza umsebenzisi ithuba loku bonisa ulwazi (izaziso) ze izinhlelo zokusebenza noxhumana nabo. Konke lokhu, ngokusho amaphrofayili ahlukene (izindlela), njengokuthi, okomuntu siqu, umsebenzi noma ukulala. Ngale ndlela, lungisa ulwazi lomsebenzisi lube nezikhathi nemisebenzi yosuku.
Futhi kalula ukusuka kokugxilile kuye kokunye, ngokuslayida nje umunwe wakho esikrinini ukuze wenze ushintsho. Ngakho ngcono ukuhlushwa okudingekayo ngesikhathi esifanele.
Ilabhulali yezithombe ezabiwe nge-iCloud
izofaka a indlela ethuthukisiwe yokwabelana ngezithombe noxhumana nabo obafunayo. Ngokusekelwe ekusetshenzisweni kwe I-iCloud Photo Library. Ukuze bonke labo othintana nabo abamakwe kubo bakwazi ukuphatha (ukwengeza, ukuhlela nokususa) futhi babelane ngezithombe abazifunayo. Ngisho nokufinyelela, ukuze ukwazi ukwabelana ngezithombe ngokuqondile kusukela kuhlelo lokusebenza lwekhamera.
Futhi okuhle kunakho konke, izincazelo, amagama angukhiye nezinye izici zevelu ezihlobene noma ezihlotshaniswa ne izithombe nemifanekiso wenjabulo umtapo wezithombe, basho vumelanisa ukuze bonke abasebenzisi bayo babe nokufana abanakho.
Ukuphathwa komlayezo kuthuthukiswe kakhulu. Ngokusemandleni akho, khansela umlayezo osanda kuthunyelwa noma uwuhlele ukuze ugweme ukuthunyelwa okuyiphutha futhi unikeze amathuba esibili okuchitshiyelwa. Futhi, izokuvumela ukuthi umake umlayezo ofundiwe njengongafundiwe, ukuze ukwazi ukuwuphendula ngesikhathi esifanele.
Bazongeza ngisho izici ezengeziwe ezipholile kuya ku uhlelo lokusebenza lomlayezo. Njengokuthi, ukusetshenziswa UngahlukıselanaPlay ukuze esikrinini somlayezo, bobabili abasebenzisi bangajabulela okuqukethwe kwe-multimedia edlalwa omunye. Isibonelo, ingoma noma ividiyo. Futhi ungabelana ngamanothi, izethulo, izikhumbuzo, amaqembu amathebhu weSafari, phakathi kwezinye izinto, noxhumana naye ngamunye osungulwa ukuxhumana naye ngemiyalezo.
Ukuphathwa kwe-imeyili okuhlakaniphile
Kulesi sigaba, i-Apple ifake ithuba lokuthola imiphumela enembe kakhulu nephelele lapho usesha ku isicelo semeyili. Ukuyobonisa iziphakamiso ngisho nangaphambi kokuba noma yikuphi ukusesha kuqalwe, okungukuthi, iphethini ibhaliwe ukuyiqala.
Ngaphezu kwalokho, ithuba lokukwazi khansela noma hlela ukulethwa kwe-imeyili. Futhi, ngisho nethuba lokulandelela i-imeyili nokwengeza izixhumanisi ezifaka phakathi ukubuka kuqala kokuqukethwe okuxhunyiwe.
5 ezinye izindaba ezibalulekile
Ukuthuthukiswa Kwesiphequluli Sewebhu seSafari: Okuhlobene nokuvikeleka okungcono, mayelana nokuphathwa kokhiye wokufinyelela, ukuze uthole ukungena okuphephile nokushesha kakhudlwana; kanye nokusetshenziswa kwamaqembu amathebhu okwabelwana ngawo.
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwamamephu: Okuhlobene nokuhlelwa okungcono kwemizila yohambo olungase lube khona, okuhlanganisa ithuba lokumaka izitobhi ezingase ziphume ukuze kukhishwe.
ubuhlakani bokwenziwa bunwetshiwe: Okuhlobene nokuphathwa okungcono kokuqukethwe kwe-multimedia (izithombe, amavidiyo) ukuze kutholwe futhi kuphathwe izinto ezihlukahlukene ezikuzo.
ukubizela okuhlakaniphile: Ihlobene nokucolisiswa okukhulu lapho udala umbhalo usebenzisa imiyalo yezwi, nezimpawu zokubhala ezizenzakalelayo, ukusetshenziswa kwama-emoji nokwengeza iziphakamiso ze-QuickType ngaphandle kokushiya umbhalo onemininingwane.
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwasekhaya: Okuhlobene nokuhlanganiswa okubanzi kwamaselula namadivayisi ezishintshayo zasekhaya, ukuze kuzuzwe ikhwalithi ephezulu ekuphatheni izici ezifana nesimo sezulu, ukukhanya nokuphepha.
Okokugcina, uma ukuthola kuthakazelisa ukuqhathanisa le ukusebenza kwamanje nezici ze-iOS 15 nalabo be inguqulo ye-iOS 16 yesikhathi esizayo, sikumema ukuthi uhlole okulandelayo isixhumanisi. Noma, uma ufuna ukwazi ukuthi iselula yakho ye-iPhone yamanje iyahambisana nenguqulo ye-iOS 16 yesikhathi esizayo, chofoza lokhu okunye. isixhumanisi.
Ngamafuphi, noma cha Abasebenzisi be-iPhone ne-iOS, ngokuqinisekile uthokozile noma uhlabeke umxhwele kakhulu «yini entsha ku-iOS 16» ukuthi ukwazile ukuhlangana lapha. Amanoveli ethulwe ngokusemthethweni kulo Juni emcimbini WWDC22. Futhi unjalo, zingamanye amaningi afakwe kuwo, ngakho-ke uma ufuna ukwazi zonke ngokuningiliziwe, ungangabazi ukuya ngqo kuwebhusayithi ye I-Apple ku-iOS 16, ukuze abonisane nabo bonke.
Kodwa, uma kwenzeka, awuyena umsebenzisi olula we-iPhone ne-iOS, kodwa a umsebenzisi wamandla noma umthuthukisi, kanye nelunga le Uhlelo Lonjiniyela we-Apple (Uhlelo lokusebenza lwe-Apple Developer); futhi ufuna ukufaka nokuhlola yini entsha kule nguqulo ye-beta, khumbula ukuthi ungakwenza ngokuvula ifayela le iphrofayili yonjiniyela kudivayisi yakho yamanje.
Noma ukwehluleka lokho, ukulanda nokufaka i-a iphrofayili yonjiniyela kusuka kusizindalwazi esikhethekile. Kodwa ungakukhohlwa lokho sebenzisa izinguqulo ze-beta kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza kuhilela izingozi ezithile, ngakho-ke kungcono kakhulu ukukwenza kudivayisi efanelekile, ukusetshenziswa kwesibili noma okunye.
Uma kungenjalo, okuhle kungaba ukulinda phakathi Septhemba no-Okthoba walo nyaka ka-2022, ukuze ukwazi ukusebenzisa I-iOS 16 ngokusemthethweni futhi izinzile, ukuze ujabulele zonke izindaba zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo zokusebenza » Lezi izici ezintsha eziyi-10 ezimangaza kakhulu ze-iOS 16